Gorowa ropes in Pasuwa - DailyNews Live
Godknows Matarutse • 24 July 2013 9:10AM • 2 comments
Takazvitaura wani kuti maforeign coach haashande muZimbabwe aya. Chavanoda imari chete. Imi tsiratsira munokoromora MaJeremani. We need a local who carries National Pride and Connects with players.
ChimedzahMapfumo - 24 July 2013
Gorowa we want to win zvivanhu izvi zvawatora ndezve chomama chisingadi gedhe izvi. Asi zvakanzi Chan ndeye ma locals futi.